Facemask mora vidy, Sina, orinasa, mpanamboatra ary mpamatsy - Dongguan FUYA METAL & Plastic Products Co., Ltd.
Home > Products > Facemask
Noho ny famolavolana valizy an'habakabaka tokana dia tsara kokoa ny fifindran'ny rivotra noho ny saron-tava fanary mahazatra ary mety amin'ny akanjo maharitra
Esory ny singa sivana ary azo esorina amin'ny alikaola na alikaola izany. Mila 7 andro fotsiny ny fanoloana ny singa sivana raha vao miverimberina ampiasaina ny sarontava, izay tsara kokoa noho ny KN95Ny vokatra tsara kalitao, ny vidin'ny fampiasana isan'andro dia tsy mihoatra ny 0.2 yuan, ara-toekarena. (Omena singa sivana 10 ny vokatra)
Ny vokatra dia mandray ny famolavolana ny suction sy ny fisarahana, ny rivotra dia voasivana eo afovoany, ny fikorianan'ny rivotra dia mivezivezy tsy mitarika amin'ny andaniny roa, izay mifoka tsara ary manakana ny fototr'ilay sivana tsy ho voaloto.
Noho ny fampiasana famolavolana valizy tokana, ny fofonaina noho ny sarontava ankapobeny indray mandeha izay mety kokoa hatao mandritra ny fotoana maharitra.
Ny vatan-tava dia vita amin'ny gel silica izay malefaka sy mahazo aina
Ny sarontava manontolo dia milanja 55 grama fotsiny, izay maivana ary tsy misy enta-mavesatra
Ny endrika amam-borona dia azo andrahoina, gel silica tsy tia hoditra, aorian'ny fiakanjoana dia tsy hanana fahatsapana burr, ny hatsembohana dia tsy mahazo ny tsy fahazoana aina miraikitra amin'ny hoditra. Famolavolana ny fiarovana ny singa sivana, afaka mampihena ny fandotoana mivantana ny singa sivana, miaraka amin'izay koa, afaka manadio ny sarontava, manalava ny fampiasana ny fahanton'ny singa sivana!
Ny orinasa Facemask dia manana kalitao avo, tsara laza ary serivisy mieritreritra ary nahazo dera iraisan'ny mpanjifa tao an-trano sy tany ivelany. Miaraka amin'ny vidiny mora dia hahazo Facemask serivisy sy serivisy tena tsara ianao. Miaraka amin'ny "kalitao tena tsara manome marika miavaka" ho tanjon'ny orinasa, ampiharo fatratra ny fenitra momba ny rafitra fanamarinana kalitao ISO9001, 9002 ~